OnePlus 6T Review - Rule News
OnePlus telefoonada mar walba wanaagsan lacag, bixiya caddaymaha sare ee qalabka si fiican loo dhisay, laakiin aan ku riixaya xuduudaha waxa suurto gal ah.
Iyada oo in-bandhigay scanner faraha iyo waxqabadka degdeg ah, tani waa casriga ah ee keenta oo dhan-screen qorshee uruursanayey ah
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “dib u eegis OnePlus 6T: aad leedahay lahaa in double qaataan ka khayr badan si ay u helaan” waxaa qoray Samuel Gibbs, waayo, theguardian.com on Friday 2nd November 2018 06.00 UTC
OnePlus 6T The xaqiijinayaa in jarida-ku laayeen technology ma aha in ay ku kici Dhulka, keeno ah oo in-bandhigay scanner faraha iyo uruursanayey yar kaliya £ 500.
OnePlus ayaa wax fudud oo sano, bixiya caddaymaha ugu qiimaha miisaaniyadda. Qiimaha ayaa si tartiib tartiib ah ilaa cuduradaas miisaaniyadda ma-xad-si, laakiin heerka Hadba iyo technology ayaa sidoo kale hagaagay.
OnePlus 6T waxay ku dhisan tahay mar hore ku OnePlus fiican 6, by sii wax iska jaro aan ahayn screen. qurux badan ayaa, tegayo iyo midabo bandhigay OLED waa smidgen weyn ee 6.41in, iyadoo garka yar hoose iyo uruursanayey ah teardrop-qaabeeya yar hogaanka.
naag carmal ah uruursanayey peak-sida ee shaashadda ma heli jidka farriimaha iyo khadadka ay nadiifinta runtii waa kuwo soo jiidasho leh. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Waa design cajiib ah oo uu xaqiijinayaa in noqtay, waayo, camera sawir ah ma aha inay noqoto daakhilaad. Waxa ay u muuqataa wax yar sida ugu sarreysa naag carmal ah, laakiin si degdeg ah illoobeen ku saabsan, iyo xitaa waxaa qarin karaan in bar madow haddii aad neceb noqtay. Gudoomiyaha bahal waxaa gundhig in qar oo ugu sarreeya aad ee telefoonka kor ku xusan camera ah oo ka shaqeeya wanaagsan marka aad telefoonka.
Bartamaha ku yaal oo ku saabsan 2cm ka soo xagga hoose ee shaashadda waxaa ku qarsoon-bandhigay scanner faraha in nalalka ilaa midabka cagaaran korontada duurjoogta ah marka firfircoon. Taasi ayaana ka dhigeysa muraayadda frosted ama safeeyey dib free of calaanjin marka laga reebo ugu camera iyo flash LED.
siman The, galaas qalooca dhabarka dareensan fiican in gacanta iyo ma aha sida meelo sibiibix ah sida qaar ka mid ah, laakiin waxa ay simbiriirixan doonaa alaabta haddii aadan si taxaddar leh. galaas uu la kulmo dhinacyada biraha yar dibinta ah labada hore iyo xagga dambe ee qalabka, taas oo aanu dareemi aan xad iyo sidoo dhammeeyey badan ay dhaceen,.
Ugu ballaaran 74.8mm, 8.2mm qaro weyn oo 185g oo miisaankeedii, 6T OnePlus abid waa sidaas wax yar ka cidhiidhi, dhumuc weyn oo culus ka badan ay dhaceen,, laakiin waa cidhiidhi iyo 23g xumbo ah iPhone XS Max iyo hareeraha dhinacyada isku wareega oo dhan sida Pixel Google 3 XL.
hoose ee telefoonka ayaa grilles Gudoomiyaha symmetrical, mid ka mid ah taas oo loogu talagalay show, iyo dekedda USB-C, samaynta 6T ugu horeysay ka OnePlus aan godka headphone a.
Guud ahaan waa design a cayishay in uu sidaa daraadeed waxa understated ku dhowaad yar bannaan ee midabka madow saqda dhexe frosted ah.
Screen: 6.41buuxda HD AMOLED (402ppi)
Kaydinta: 128 ama 256GB
Nidaamka Operating: OxygenOS ku salaysan Android 9 goobeed
Camera: 16Xildhibaan + 20MP gadaal camera dual, 16Xildhibaan camera hore jeeda
Xiriiriyaan: LTE, dual sim, Wi-Fiac, NFC, Bluetooth 5 iyo GPS
Cabirka: 157.5 x 74.8 x 8.2mm
Speed ​​iyo socdeyba
Mid ka mid ah nooc ka mid ah godadka afhayeenka waa Gaarna bilicsanaanta. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
6T OnePlus waxay leedahay isla Qualcomm Snapdragon 845 processor, 6 ama 8GB ee RAM iyo ugu yaraan 128GB of kaydinta sida OnePlus 6 bilaabey May, iyo sida matalaa sida dhab ahaan la mid ah isticmaalka guud.
OnePlus 6T The umado weheliyaan, tallaabadaas ama aad iyo aad u xafiiltamaan si dhaqso cayriin ee apps bilaabay, bedelaan apps oo bilaabeyna camera ah. waxqabadka ciyaaraha sidoo kale waa uruursanayey top la isticmaalayo nidaamka hab ciyaaraha cusub iyo boost smart OnePlus ayaa sare u loading ciyaarta. Jir-heerarka ahaayeen super siman xitaa ka badan saacad ama si ciyaaro Shadowgun warkii.
Nolosha Battery waa adag laakiin aan caadi ahayn. Iyadoo isticmaalka xad culus u socon lahaa 30 saacadaha u dhexeeya eedeeyay, waarta ka alarm subax 7da ah maalintii kow iyo iskala ilaa jiheysteen 12-duhurnimo maalintii laba.
Taasi waxay ahayd iyadoo la isticmaalayo sida qalab koowaad, dirista iyo helista boqolaal emails, fariimaha iyo farriimaha riix, dhagaysto shan saacadood oo music on Bluetooth headphones, daawashada saac ee Netflix, 30 daqiiqo ee ciyaaraha iyo rasaas ku saabsan 15 sawiro.
OnePlus 6T The si deg deg ah soo jiidasho leh soo eedeeyo via xeedho soonka in uu yimaado waa la, gaarey amar buuxa ku wareegsan 90 daqiiqo - laakiin waxa uusan haysan xukun wireless.
bandhigay daarmayaay'e The ilaa nalalka marka aad guurto telefoonka ama aad u hesho digniin, oo muujinaya meesha uu shidma in-screen faraha. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
OxygenOS waa version ah ee Android OnePlus ee, waqtigan ku salaysan dambayn Android 9 goobeed.
Sida qoraalkii hore, OxygenOS 9 waa version yar safeeyey oo waayo aragnimo ah Android caadiga ah, dhigay in ay noqdaan kuwo ka jawaabaan sida ugu macquulsan, halka ku daray qaar ka mid ah customisations aadka loogu baahan yahay.
Tusaale ahaan, aad u leedahay inaad doorato of guriga caadiga ah, iyo dib badhamada navigation guudmar, button tilmaam cusub Google ama waji ka dadban OnePlus oo waa ay ka sareeyaan dadaalka Google iyo saar baahida loo qabo bar navigation a hoose ee telefoonka. Waxa kale oo aad edit karaa oo walxood oo ka muuqda bar xaaladda, beddeli midabka ah ee interface iyo gelinno kale oo gogo '.
Awoodda in ay nuqul apps qaar ka mid ah, sida Facebook, Instagram, WhatsApp iyo Uber waa mid waxtar leh haddii aad xisaab badan ku xidhan lambarada telefoonka kala duwan, oo gaar ah faa'iido u ah kuwa ku riday laba adkaaday laba taleefan lambarrada ee telefoonka.
Siyaabo badan, OxygenOS waa u dhaw in ay "stock" Android caatada ah iyo waxa daahirka ah championed by dunida ka badan version of Android on Google ee ay casriga ah Pixel.
shidma waxay faraha ku-soo bandhigay ku dhawaad ​​sixir. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Waxa ugu weyn cusub ee 6T OnePlus waa scanner faraha gundhig ee shaashadda ah. Waa qalab labaad sida inay markab la mid ah ka dib markii Huawei Mate 20 Pro in October, laakiin waxaa wax yar waa ka dhaqso iyo ka badan oo sax ah.
kaalinta A waa wax yar ka weyn mid ka mid ah oo ku saabsan Mate 20 Pro nalalka ilaa shaashadda halkaas oo aad leedahay si aad riix suulka in lagu furo qalabka ama app ka dibna la karsado leh siyasad dheer oo doog ah higayaa sida uu baaritaanku aad print.
Waxaad u leeyihiin in ay wax miiran suulka ama farta yar adag tahay shaashadda ka badan aad si caadi ah u lahaa on shidma gadaal Jaha ah, oo waxay ku waa sidaas wax yar ka gaabis badan ugu fiican jiilka jir ah dareemayaal, laakiin ay u shaqayso si aad u wanaagsan haddii aad u hesho barta saxda ah.
waxaa Helitaanka barta xaq daro eegaya telefoonka qaadataa wax yar ka qabsaneysa, laakiin laba cisho gudahood Waxaan ahaa awoodaan in ay soo jiid off ma-fiirin sidani oo ku wareegsanaa 90% waqtiga.
Waxa kale oo jira nidaam wejiga Unlock si dhakhso ah adiga oo isticmaalaya camera sawir ah, laakiin ma aha 3D iyo si ka yar ammaan badan ay xafiiltamaan ee sida Apple ee Face ID ama Huawei ee 3D wejiga Unlock.
app camera OnePlus waa wanaagsan, la-to-isticmaalka fudud qalab iyo Qofna lama faragelin AI. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
6T OnePlus waxay leedahay 16 + 20-megapixel nidaamka dual-camera isku on daafaca iyadoo ay OnePlus 6, iyo sidoo kale u qabata, soo saaro qaar ka mid ah aad u fiican, images si fiican u faahfaahsan, iftiinka wanaagsan. waxqabadka iftiin Low waa wanaagsan yahay, laakiin ma aha arrin ilaa par leh ugu fiican ee ka Samsung, Huawei, Apple ama Google.
The hab iftiinka yar yahay nightscape cusub qabtaan shaqo wanaagsan oo baabi'inta gacanta eegmo ka darbo dheer-gaadhista. camera sawir sidoo kale waa wanaagsan, laakiin waxay noqon kartaa wax yar ka maydhay soo baxay oo jilicsan on faahfaahsan ee nalalka saboolka ah. mode sida sawirka ka shaqeeya sidii lagu xayeysiiyaa.
Guud ahaan, camera ku 6T OnePlus waa wanaagsan yahay, laakiin ma aha arrin aad u fiican. Inta badan noqon doonaa mid aad ugu faraxsanahay, gaar ahaan haddii lagu casriyeeyo ka phone a laba-sano jir ah.
Slide button u dhexeeya saddex jagooyinka si ay u dejiyaan taleefanka si aamusan, gariiraan ama giraanta. Waa wax weyn. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Marka aad isticmaali faraha shidma hab habeenkii bandhigay waxaa si ku meel gaar ahaan naafada ah iyo ka dibna baaba'ayso soo laabtay mar aad quful telefoonka
phone ayaa ku soo beegmay iyada oo sokeeya shaashad hore on
Gudoomiyaha hal hoose-rasaas waa rabshad badan oo uu leeyahay qadar yara badan oo Bass for telefoonka, laakiin waxaa si fudud u hor istaagay halka ciyaaro ciyaar
daaro slider heegan OnePlus ee u dhexeeya aamuseen, gariiro iyo Giraanta oo weli waa cajiib
Kharashka OnePlus 6T £ 499 madow muraayad la 6GB ee RAM iyo 128GB of kaydinta.
kala duwanaansho la 8GB ee RAM iyo 128GB of kaydinta waxaa laga heli karaa muraayad ama habeenbadhkii madow waayo, £ 529, halka kala duwanaansho la 8GB ee RAM iyo 256GB of kaydinta waxaa laga heli karaa oo keliya ee madow saqda dhexe loogu talagalay £ 579.
Wixii la barbardhigo, 128GB ah Huawei Mate 20 Pro kharashka £ 900, 64GB ah Google Pixel 3 XL kharashka £ 869, 128GB ah Samsung Galaxy Note 9 kharashka £ 899, 64GB ah iPhone Janumet kharashka £ 749 iyo 64GB ah iPhone XS Max kharashka £ 1.099.
Taas beddeleen 6T OnePlus ah. Waxaa la riixaya waxa suuragal ah la design caanka dhan-screen isticmaalaya yar a, uruursanayey teardrop soo jiidasho iyo garka yar, waana telefoon fiican, waxaa ka. Laakiin waa hordhaca ah ee scanner ah faraha goynta-ku laayeen in-soo bandhigay, oo taas oo run ahaantii si fiican u shaqeeyaan yar sida badh qiimaha ah iPhone XS, ugu cajiib ah.
Sure, camera ee ma aha arrin sida maskaxda ku-qarxiyaan sida ugu fiican, ma jirto xukun wireless, waxa aanu wax ka mid ah hababka 3D wejiga sheeegateen oo qaar ka mid ah iyo waxa ay u muuqataa in yar oo Cad, laakiin wax walba oo kale waa uruursanayey top. Xitaa aragnimo software waa heer sare.
At £ 500, aad u leedahay in waqti badan wayn lacag dheeraad ah si aad u hesho telefoonka ka fiican yahay 6T OnePlus ah.
Iidooyinka: nolosha batteriga wanaagsan, screen weyn, qaab aad u fiican, dual-sim, camera wanaagsan, Bluetooth 5, software weyn, uruursanayey yar, in-screen shidma faraha, slider heegan
Arrrimaha: galaas dib laakiin ma xukun wireless, ma IP iska caabin biyo rating, ma kaydinta fideysa, ma headphone saldhigba
dhabarka galaas frosted waa wax yar meel bannaan ka jidhka ku, halka dhameysatay muraayad waa magnet faraha a. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
dib u eegis Honor Play: smartphone wareegsan oo dhan-weyn ka yar £ 300
dib u eegis OnePlus 6T
← iPhone Janumet Review Waa kuwee laptop Apple MacBook waa in aan soo iibsan? →